စိန့်လူးဝစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ - မည်သူ၊ မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖုန်းဆက်မည်နည်း• DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
Dutchtown ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ - မည်သူ၊ မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖုန်းဆက်မည်နည်း
သင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှိသံသယဖြစ်ဖွယ်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုသင်ကြုံတွေ့ရပါကမည်သူကိုခေါ်သနည်း။ များသောအားဖြင့်ရဲကိုခေါ်လိမ့်မယ်။ အောက်တွင်ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးပါမည် စိန့်လူးဝစ်မြို့တော်ရဲဌာနနှင့်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ရရှိနိုင်အခြားနည်းလမ်းစူးစမ်း။
ရဲကိုခေါ်လျှင် ၉၁၁ သို့မဟုတ်အရေးပေါ်မဟုတ်သောလိုင်းရှိပါကအချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှများများရရန်ကြိုးစားပါ။ မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည့်အချက်များတွင်တည်နေရာ၊ သံသယရှိသူသို့မဟုတ်သံသယဖြစ်ဖွယ်ယာဉ်များဖော်ပြချက် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) နှင့်နောက်ထပ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသောအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။
ရာဇ ၀ တ်မှု၏အမှန်တကယ်လိပ်စာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါသို့မဟုတ်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်မှာ - သင့်ကိုယ်ပိုင်လိပ်စာကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တှငျဖျောပွထားအဖြစ် NIS အရင်းအမြစ်လမ်းညွှန်၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများသည်ရဲစခန်းနှင့်အခြားမြို့တော်ဌာနများမှနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်အတန်းသို့လိပ်စာတစ်ခုကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
သင်၏အမည်နှင့်ပြန်လည်ခေါ်ဆိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသင်စွန့်ခွာလိုပါသလားဆရာဝန်များမှမေးမြန်းလိမ့်မည်။ ဒီမလိုအပ်ပါ သင်အစီရင်ခံစာများကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုသင်ထားခဲ့ပါကအရာရှိများသည်ပိုမိုသောအချက်အလက်များရရှိရန်ထိတွေ့နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အသက်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများအတွက် ၉၁၁ ကိုခေါ်ဆိုကြသည်။ အရေးပေါ်ရဲ၊ မီးသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်လိုအပ်ပါက ၉၁၁ သို့ခေါ်ဆိုပါ။ သင်၏အခြေအနေသည်အရေးပေါ်အခြေအနေဟုတ်မဟုတ်မသေချာလျှင် ၉၁၁ သို့ခေါ်ပါ။ သံသယဖြစ်ပါက ၉၁၁ သို့ခေါ်ဆိုပါ။
မီးသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်သင် 911 ကိုအမြဲဖုန်းဆက်သင့်သည်။ အကြမ်းဖက်ရာဇ ၀ တ်မှုများသို့မဟုတ်တိုးတက်လာသောရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက် ၉၁၁ သို့ခေါ်ဆိုပါ၊ သံသယရှိသူသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများ၏ဖော်ပြချက်များကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖော်ပြပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သောမတော်တဆမှုတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါက ၉၁၁ သို့ခေါ်ဆိုပါ။ မတော်တဆမှုသည်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့်သို့မဟုတ်အနီးအနားရှိသူများအားအခြားအန္တရာယ်များကိုတင်ပြနေလျှင် ၉၁၁ သို့လည်းသင်ဖုန်းဆက်သင့်သည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်သော်လည်းအရေးပေါ်မဟုတ်သည့်ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါသည်။ (314) 231-1212။ အကယ်၍ သင့်တွင်ချက်ချင်းတုန့်ပြန်မှုမလိုအပ်သည့်ပြhaveနာရှိပါကအရေးပေါ်မဟုတ်သောလိုင်းသို့ဖုန်းဆက်ပါ။
အချို့သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများသည်အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်သောလိုင်းသို့ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ယောက်ယောက်ကသင်၏ယာဉ်သို့မဟုတ်ကားဂိုဒေါင်ထဲမှပစ္စည်းများကိုနေ့ချင်းညချင်းခိုးယူလျှင်အရေးပေါ်မဟုတ်သောလိုင်းကိုခေါ်ပါ။ သံသယရှိသူမရှိဘဲရာဇ ၀ တ်မှုများလွန်ခဲ့သောအချိန်ကဖြစ်ပွားခဲ့လျှင်အရေးပေါ်မဟုတ်သောနံပါတ်သို့ခေါ်ဆိုပါ။
ဤအမှုများအများစုတွင်ရဲများသည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သည့်နေရာသို့အမှန်တကယ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်သတင်းအချက်အလက်ကိုယူပြီးဖုန်းမှတစ်ဆင့်သတင်းပို့လိမ့်မည်။
ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သော်လည်းသံသယရှိသူအနီးအနား၌မရှိလျှင်ရဲများသည်ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းဖြစ်ရပ်များကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ရန်ကူညီနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာစာရင်းဇယားများကိုပိုမိုတိကျစွာခြေရာခံရန်အထောက်အကူပြုသည့်အစီရင်ခံစာကိုလည်းသူတို့ကပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သင်၏အာမခံသည်အစီရင်ခံစာမိတ္တူကိုတောင်းခံနိုင်သည်။
သင်သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်သေနတ်သံများကိုသတင်းပို့ရန် 911 သို့မဟုတ်အရေးပေါ်မဟုတ်သောလိုင်းကိုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ သေနတ်သံများကိုကြားလျှင်အနည်းဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကိုသတိပြုပါ။ ရိုက်ချက်များပစ်ခတ်သည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်၊ သင်မည်မျှကြားရသောရိုက်ချက်ဖြစ်သည်ကိုသင်မှတ်သားပါ။ သင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည့်မည်သည့်အပိုသတင်းအချက်အလက်မဆိုလည်းအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
Gunshots တွင်ခေါ်ဆိုခြင်းအတွက် DutchtownSTL ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
ရိုက်ချက်တွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာသေချာတယ်ဆိုရင်၊ ၉၁၁ ကိုခေါ်ပါ။ ရဲတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ဖို့တိကျသောစမှတ်ပေးပါ။
သင့်တွင်သတင်းအချက်အလက်သိပ်မများပါက“ ရိုက်ချက်များကိုပစ်ခတ်သည်” မှလွဲ၍ သင်အရေးပေါ်မဟုတ်သောလိုင်းမှတဆင့်သင်လုပ်နိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းအဖြစ်အပျက်ကိုအစီရင်ခံရန်အရေးကြီးသည်။ တူညီသောareaရိယာတစ်ခုတည်းမှခေါ်ဆိုမှုများစွာသည် ပို၍ တိကျသောတည်နေရာကိုထောက်ပြနိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ခေါ်ဆိုမှုအပေါ် မူတည်၍ ရဲအရင်းအမြစ်များကိုခွဲဝေချထားနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်တိုတောင်းလျှင်ပင်သင်၏ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ ခေါ်ရန်အမြဲအရေးကြီးတယ်
သေနတ်သံများကိုခေါ်ဆိုသောအခါ၊ မည်သည့်နေရာတွင်ပစ်ခတ်သည်ကိုတိတိကျကျခန့်မှန်းရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ။ သူတို့ကနောက်ထပ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများဖြစ်လာသည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကလမ်းနာမည်နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနံပါတ်ကိုပေးပါ။ နောက်ထပ်ရိုက်ချက်များအတွက်သင်၏အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပါ။ နိုင်ငံသားများစွာသည်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်ချိန်တည်းသေနတ်ပစ်ခတ်မှုကိုသတင်းပို့သည့်အခါရဲများသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ဒေသကိုကျဉ်းမြောင်းစေနိုင်သည်။
911 dispatcher ကသင်ဘယ်လောက်ကြားခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းမေးလိမ့်မည်။ သင်မှတ်မိနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုသင်မည်မျှရိုက်လိုက်သည်၊ ခန့်မှန်းခြေမည်မျှရှိသည်ကိုဖော်ပြပါ။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်လျှင်မြန်စွာပစ်ခတ်ခြင်းခံရသည် (သို့) မခံရသည်ကိုဖော်ပြပါ။ ပုံစံတစ်ခုကိုသင်မှတ်မိနိုင်လျှင်ဖော်ပြပါ (pop-pop … pop-pop-pop), ထို dispatch ပြောပြပါ။ အကယ်၍ ရိုက်ချက်များသည်ကွဲပြားသောအသံဖြစ်လျှင်၎င်းသည်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်မကသောကွဲပြားခြားနားသောသေနတ်များမှလာနိုင်သည်ဟုထင်ပါက၎င်းကိုသတင်းပို့ပါ။
SLMPD တွင်အဆက်အသွယ် (၂) ခုရှိပြီးဖုန်းနံပါတ် ၉၁၁ သို့မဟုတ်အရေးပေါ်မဟုတ်သည့်လိုင်းသို့မတက်နိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအစီရင်ခံရန်ရှိသည်။
ဖြစ်ပွားခဲ့သောရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာသိကောင်းစရာသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်၊ ဖုန်းခေါ်ပါ စိန့်လူးဝစ်ဒေသဆိုင်ရာ Crimestoppers at (၈၆၆) အချက် ၃၇၁ (8477) သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် Crimestoppers ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အစွန်အဖျားတင်သွင်းပါ။ အချို့သောအမှုများတွင်အစွန်အဖျားသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကိုဖမ်းဆီးစေသည့်အတွက်ဆုတစ်ခုရနိုင်သည်။
SLMPD's Secret Witness Hotline သို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဂိုဏ်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဖုန်းခေါ်ခြင်းဖြင့်လည်းသတင်းပို့နိုင်သည် (၃၁၄) ၂၄၁-COPS (2677) ။ တည်နေရာ၊ သံသယရှိသူအမည်များသို့မဟုတ်ဖော်ပြချက်များ၊ လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားများအပါအဝင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုချန်ထားပါ။
ထို့အပြင်သင်၏ အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကု တိကျသောတည်နေရာသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေနှင့်သက်ဆိုင်သောဆက်လက်စိတ်အညစ်လှုပ်ရှားမှုတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားသည်။ The NIS ရာဇ ၀ တ်မှုတရားစီရင်ရေးစနစ်အတွင်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရွေးစရာများကိုရှာဖွေရန် Problem Properties Unit နှင့်အခြားရဲများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်မည်။
မသေချာပါ? 911 ကိုခေါ်ပါ
အကယ်၍ အခြေအနေသည် ၉၁၁ ခေါ်ဆိုမှုကိုအာမခံသည်ဖြစ်စေမသေချာလျှင်၊ ၉၁၁ သို့ခေါ်ဆိုပါ။ ၉၁၁ သို့ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အရေးပေါ်မဟုတ်သောလိုင်းများအားလုံးသည်တူညီသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနသို့သွားသော်လည်းအရေးပေါ်မဟုတ်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုအရေးတကြီးလိုအပ်သည်။ သံသယဖြစ်ပါက ၉၁၁ သို့ခေါ်ဆိုပါ။
ပို။ ပို။ Dutchtown areaရိယာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအတွင်း၌တည်ရှိသည် နင် ရဲခရိုင်, ပထမ ဦး ဆုံးခရိုင်နှင့်တတိယခရိုင်။
SLMPD ပထမ ဦး ဆုံးခရိုင်
အဆိုပါ SLMPD ၏ပထမ ဦး ဆုံးခရိုင် Dutchtown ၏တောင်ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်းနှင့် Pleasant တောင်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ပထမခရိုင်၏နယ်နိမိတ်သည်တောင်ဘက်ရှိမြို့အကန့်အသတ်မှသည်၊ မြောက်ဘက်တွင် Meramec လမ်း၊ တောင် Grand Boulevard နှင့် Chippewa လမ်းအထိဖြစ်သည်။
စိန့်လူးဝစ်ရဲရဲဌာန၏ပထမ ဦး ဆုံးခရိုင်။
ပထမခရိုင်သည်တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်ရှိ Holly Hills၊ Boulevard Heights, Princeton Heights နှင့် Southampton ကဲ့သို့သောအခြားရပ်ကွက်များပါ ၀ င်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးခရိုင်ကိုဆက်သွယ်ခြင်း
ပထမခရိုင်သည်အနောက်တောင်ပိုင်းဥယျာဉ်ရပ်ကွက်ရှိ SLMPD ၏တောင်ပိုင်းကင်းလှည့်ဌာန၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ မှာ South Patrol station ကိုဆက်သွယ်ပါ (314) 444-0100.
ပထမခရိုင်ရှိ Dutchtown ၏အိမ်နီးချင်းဆက်ဆံရေးအရာရှိသည် Ofc ဖြစ်သည်။ Steve Burle သူ့ကိုအီးမေးလ်ပို့လို့ရတယ် smburle@slmpd.org.
ဗိုလ်ကြီး Donnell Moore သည်ပထမဆုံးခရိုင်၏တပ်မှူးဖြစ်သည်။ သငျသညျတောင်ပိုင်းကင်းလှည့်ဘူတာရုံကိုခေါ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်သူ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် dmoore@slmpd.org.
ဗိုလ်မှူးရိုင်ယန်ဝမ်းကွဲသည်တောင်ပိုင်းကင်းလှည့်ဌာနမှူးဖြစ်သည်။ သငျသညျကိုခေါ်ခြင်းအားဖြင့်တောင်ပိုင်းကင်းလှည့်မှာသူ့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် (314) 444-0100 သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ခြင်း rocousins@slmpd.org.
အဆိုပါ SLMPD ၏တတိယမြောက်ခရိုင် Dutchtown ၏မြောက်ဘက်အပိုင်းဖြစ်သော Gravois Park နှင့် Marine Villa တို့ပါဝင်သည်။ တတိယမြောက်ခရိုင်တွင် Meramec လမ်း၏မြောက်ဘက်နှင့် Grand အရှေ့ဘက်ရှိအရာအားလုံးပါဝင်သည်။
တတိယမြောက်ခရိုင်သည်မြောက်ဘက်၌ Downtown ၏တောင်ဘက်ခြမ်းရှိ Chouteau ရိပ်သာလမ်းကို ဖြတ်၍ Lafayette ရင်ပြင်၊ Soulard နှင့် Benton Park အပါအ ၀ င်အခြားရပ်ကွက်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
တတိယခရိုင်သည် JeffVanderLou ရပ်ကွက်ရှိ Downtown ၏မြောက်ဘက်တွင်အခြေစိုက်။ ဗဟိုကင်းလှည့်ခြင်းဌာန၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဗဟိုကင်းလှည့်မှာအဓိကတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် (314) 444-2500.
Ofc ။ Jazmon Garrett သည် Dutchtown ၏တတိယမြောက်ခရိုင်၏အိမ်နီးချင်းဆက်ဆံရေးအရာရှိဖြစ်သည်။ သင်သူမ၏မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် (314) 444-2595 or jdgarrett@slmpd.org.
ဗိုလ်ကြီးဂျိုးမော်ရစ်သည်တတိယမြောက်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သည်။ ဗဟိုကင်းလှည့်ခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်မှာသူ့ကိုဆက်သွယ်ပါ (314) 444-2597။ သူ့ကိုအီးမေးလ်ပို့လို့ရတယ် jamorici@slmpd.org.
ဗိုလ်မှူး Renee Kriesmann သည်ဗဟိုကင်းလှည့်မှုဌာနမှူးဖြစ်သည်။ သူမကို Central Patrol မှာခေါ်။ ဖုန်းဆက်နိုင်သည် (314) 444-2500.
အချို့သောအခြေအနေများသည်ရဲတပ်ဖွဲ့၏တုန့်ပြန်မှုကိုအမြဲတစေမတောင်းဆိုပါ။ ထပ်မံ၍ သံသယရှိပါက ၉၁၁ သို့မဟုတ်အရေးပေါ်မဟုတ်သောဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ သို့သော်ရဲများသည်လူမှုရေးလုပ်သားများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသို့မဟုတ်အကြံပေးများမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။
ဒိန်းမတ် တစ် ဦး ပြုစုခဲ့သည် အခြားရွေးချယ်စရာအရင်းအမြစ်များစာရင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်မှု၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုစသည့်အထိခိုက်မခံသောပြwithနာများကိုကိုင်တွယ်ရန်။ တိကျသောပြproblemsနာများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားသူများသည်ပိုမိုထိရောက်ပြီးအပြစ်ပေးမှုနည်းသောအဖြေများကိုမကြာခဏပေးနိုင်ပါသည်။ တနည်းကား၊ ချက်ချင်းပင်အန္တရာယ်ရှိပါက ၉၁၁ သို့ခေါ်ဆိုပါ၊ သို့သော်ရေရှည်ဖြေရှင်းမှုများအတွက်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပြaနာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းချက်ချင်းအန္တရာယ်မပေးသောပြissuesနာများစွာအတွက် နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရို သို့မဟုတ်သင့် အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကု လမ်းညွှန်မှုနှင့်အကူအညီများပေးနိုင်သည် သတင်းပို့ပါ CSB သို့မဟုတ်သင့်ကိုခေါ်ပါ NIS ကုဒ်ချိုးဖောက်မှုများ၊ လစ်လပ်နေသောအဆောက်အ ဦး များပြproblemsနာများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာပြincludingနာများနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစိတ်အညစ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက် CSB သို့မဟုတ်သင်၏ NIS သည်အမှုများကို SLMPD သို့လိုအပ်သလိုလွှဲပြောင်းလိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါးအတွက်ဓာတ်ပုံများဓာတ်ပုံဆရာ၏ယဉ်ကျေးလာကြ၏ ရှင်ပေါလု Sableman.
ဒိန်းမတ် Dutchtown အိမ်နီးချင်းအရင်းအမြစ်များ Dutchtown ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ - မည်သူ၊ မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖုန်းဆက်မည်နည်း